Uma owesifazane okhulelwe engakaze awele izinwele ngaphambi kokubeletha. Lokhu kwakubhekwa njengento embi ukuthi ingane izozalwa ikhulelwe ngokwengqondo. Ngaphezu kwalokho, izingane ezazalwa ngonyaka onyakazayo zabhapathizwa, umkhosi ongcwele wawuqhutshwa kanye nabantu abahlala emadolobheni nabaseduze.
Qinisekisa noma uphikisane nalokhu akulula, iqiniso liwukuthi sinquma ukukholelwa kulezi zibonakaliso noma cha. Futhi kusukela ezinqumweni ezinjalo, futhi yakha umbono womphakathi, njengoba njalo uhlukaniswe ngezigaba ezintathu. Omunye uhlangothi ngokuzithoba ukholelwa ukuthi ukuzalwa ngonyaka onyakazayo kusho ukungajabuli, ukugula okungapheli futhi ungaphili. Ngakolunye uhlangothi, ngokuphambene nalokho, kuqinisekiswe ukuthi abantu abazalwa ngaleyo minyaka bayabalulekile, futhi akukho ngaphezulu noma abangenayo imikhiqizo yemilingo noma baphathe imilayezo emhlabeni wethu kusuka phezulu. Ithimba lesithathu liyalondoloza futhi lithatha le nkinga ngokungahloniphi okuphelele, ngaphandle kokuzikhethela abantu abazalwa ngonyaka oweqile kusukela kumbuthana jikelele.
Ake sizame ukugxilisa ekujuleni nasekujuleni kangcono futhi siqonde kangcono ohlangothini ngalunye. Ake sizame ukuqonda kangcono konke futhi mhlawumbe ngokwakho. Ake sibuke impande bese sibona inkinga, kanye naso sonke senze lokhu.
Uzozalwa ngonyaka onyakazayo - ngeke ujabule, uzothola ingane noma uzofa osemncane. Kuhlala nje kuphela ukuba uzalwe ngoFebruwari 29, futhi kungashiwo ukuthi kungcono ukuthi ungakwenzi ngaso sonke isikhathi! Kuphi kithi pritostatkoe isimo sengqondo esibi noma ukuhlobana, cishe, ngonyaka ojwayelekile? Ubani oletha ulwazi olubi kangaka kithi? Zingaphi izimpande zombuzo wesithakazelo ezivela?
Ngisho ngaphansi kukaJulia Caesar, unyaka wokuqhaqha wawumuntu ongathandeki, okwakushiwo yizinkolelo-ze, izinkolelo, tovydumki, ngisho namaphuzu ngezikhathi ezithile. Abantu abaningi bayazi noma bavele bezwa isigijimi senkolo mayelana noSasyan oNgcwele. Igama lakhe liphinde lihlotshaniswe nonyaka we-leap, hhayi embalazweni we-iridescent kakhulu. Ngokusho komqondo kazwelonke, uSasan Kasyan ubuqili, i-mercenary kanye ne-stingy. Ngandlela-thile wathengisa uNkulunkulu, etshela uSathane ukuthi yena kanye nomunye u-force wakhe waseDemonika maduze bazoxoshwa ezulwini. Kodwa-ke, waphenduka, wabuza intethelelo evela eNkosini, engatholanga isijeziso esinzima kakhulu. UNkulunkulu wanikeza ingelosi kuye futhi wamshaya ngesando ekhanda iminyaka emithathu elandelanayo, kanti owesine wanikeza ukuphumula.
Nakuba uSt. Kasyan uthethelelwe, wayesengaphansi kwensimu futhi akazange akhohlwe lokho akwenzile. Usuku lokukhumbula kwakhe lwalugubha kanye kuphela eminyakeni emine, ekholelwa ukuthi ubhekene nokulimala kwakhe unyaka wonke, kanti izingane ezizalwa ngezikhathi ezinjalo ziyingxenye yokungajabuli kwakhe.
Khona-ke, ngesikhathi esifanele, inkazimulo yobukhulu yanezelwa ekuhlonipheni, kusukela ebucayi besabekayo futhi ngokuyisimangalisa esiwubuwula nokuhlekisa. Ngokuvamile, lokhu kwakuhlanganisa yonke imiphumela.
Kukhona amacala amaningi lapho kutholakala amamomu amasha ukubhalwa ngosuku lokuzalwa kwegrafu hhayi ngoFebhuwari 29, kodwa ngoFebruwari 28 noma ngo-Mashi 1.
Kholwa konke noma cha, lolu daba luyimuntu siqu, kodwa ngisho nabasekeli abanamandla kakhulu ukuthi lokhu kuyisisungulo, ngezinye izikhathi futhi kubuye kuqinisekiswe kabusha.
Uhlangothi lwesibili luyethemba
Labo abajoyina ingxenye yesibili, futhi, bathembele ezindabeni zomlando ezidlulile, izindabakwane namathekisthi. Futhi njengoba kuyindlela elula ukuhlunga noma iyiphi inkinga nokukhipha, kuqala kokuthola imvelaphi yemvelaphi, imiqulu izokwenza okufanayo.
Kweminye imithombo yasendulo, unyaka we-leap nabantu abazalwa kulo nyaka kubhekwa njengingcwele. Kalula nje, ugcwaliswe ngencazelo emangalisa nemilingo. Unyaka ubhekwa njengento engavamile, i-pop-up, uhlobo oluthile lwewindi kwelinye izwe. Futhi abantu, ngokulandelana, abazalwa ngonyaka we-hibernation, nabo banikezwe imilingo kanye nesiphetho esiphezulu. Kukholelwa ukuthi ukubonakala komuntu onjalo endaweni yakho kuyabangela injabulo kanye nezindaba ezinhle, futhi umuntu angakunikeza ngokungazi ngezimpawu ezivela kwelinye izwe, futhi uma ungawaqonda, uzowina kuphela.
Ezikhathini zasendulo abantu abanjalo baphathwa ngenhlonipho enkulu ngehlonipho. Baphoqeleka ukuba baphile njengamahora, bezosiza bonke abagulayo, ukuphulukisa kanye nokuhlanza kokubi nobudimoni.
Uma uzalwa ngonyaka onyakazayo, impilo yakho iyogcwala injabulo nothando, uzoba nenhlanhla futhi ucebile. Abazali abathandekayo bezingane abazalwa ngonyaka onjalo bazohlinzeka ngokuguga, njengoba ingane izokhula iphumelele futhi iphumelele.
Iqembu lesithathu ligcina futhi liyalondoloza.
Ukuphikisana okuyinhloko komuntu wesithathu kuwukuthi umuntu ngokwakhe udala isiphetho sakhe siqu, futhi uma kukhona okwenzekayo, ekubonweni kokuqala, okuyimfihlakalo nokungaqondakali, akudingekile ukuphishekela ngokweqile, kungcono kakhulu ukucabangela nokuqonda ukuthi thina ngokwethu ngandlela-thile, ngezenzo namazwi ethu, ngokwabo kulesi sigaba sokuphila.
Unyaka we-leap noma cha, akudingekile ukuthi kusengaphambili kusengaphambili noma yini ingane engenacala. Ungakuphakamisi esikhundleni sezinkokheli noma abaprofethi, noma ngisho nakakhulu, hlala kuso njengesifo.
Phatha abantu "beqa" kanye nabo bonke, nhlobo, abanye babo abasoze bacabanga ukuthi bazalwa ngonyaka onjalo noma nje abazange bacabange ngakho. Kungakhathaliseki ukuthi abantu bangabandlululo, futhi imfundo enhle, uthando nokunakekelwa kwenziwa okuningi kakhulu kunokuhlela isikhathi eside sokuzalwa komntwana. E-Norway, isibonelo, kunomndeni owodwa, izingane ezazozalwa ngoFebhuwari 29, zonke ezintathu! Futhi eminyakeni ehlukene. Omunye angacabanga nje ukuthi yiziphi izinhlobo zomzamo ongafanele umndeni okwakudingeka wenze ukuze kufezeke lokhu. Futhi ososayensi oyedwa usungule uhlelo lonke kulabo abazalelwa ngoFebruwari 29, okuqukethe ohlelweni lokugubha usuku lokuzalwa kuye ngokuthi ihora lokuzalwa!
Ngakolunye uhlangothi, konke kubukeka kumnandi futhi kumnandi, ngakolunye uhlangothi, kungaba ngcono uma le mizamo iya emisebenzini evamile.
Ngakho-ke, sizobe sifingqa. Ngithemba ukuthi wonke umuntu unokuqonda okungaphezulu kwalolu daba. Sasiziqonda kangcono, futhi sifike esiphethweni esisodwa-thina, sizalwa ngonyaka ovamile noma unyaka wokuqhaqhazela, nje kuphela ukubeka intshiseko yenkathazo, siyojabula, siphilile futhi siphumelele. Futhi ubukhulu buzokwamukela, ubandlululo kanye nezingxabano ezingunaphakade akufanele kusithinte futhi kushintshe isimo sethu sengqondo kwabanye.
Ukuphila komama ongayedwa
Umlingisi odumile uSalma Hayek
Inkukhu enezinyoni ze-caramelized
Ukuthembana phakathi kwezingane nabazali
Ama-Burgers asuka ku-salmon ne-rosemary
Okufanele ukwenze uma unesifo esibuhlungu emqaleni
Uju nezindawo zalo ezizuzisayo, ezithinta umzimba womuntu
Ungalondoloza kanjani ubuhle ngesikhathi ukhulelwe?
Isisekelo sengqondo sokuxhumana kwebhizinisi
Isifiso sokushada nendoda ecebileyo
Indlela yokwenza ingane ibe umholi wekilasi?